अर्थतन्त्रमा आधारभूत रूपमै पुनः संरचनाको आवश्यकता छ - Khabar Samridhhi
विनियोजित बजेट सही ढङ्गबाट खर्च नहुने, विकास आयोजना समयमै पूरा नहुने, पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने र समग्र लगानीको प्रभावकारिता कमजोर भएपछि सरकारले खर्चको प्रभावकारिता बढाउन गत भदौ ४ गते सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठनको निर्णय गर्यो । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उक्त आयोगलाई सरकारी खर्चको गुणस्तर बढाउँदै आर्थिक विकासका लागि गर्नुपर्ने सुधारका सन्दर्भमा सुझाव पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । भदौ १२ गतेदेखि काम थालेको आयोगले खर्च प्रणाली सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने अन्तिम तयारीमा छ । यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष खनालसँग सार्वजनिक खर्चका सन्दर्भमा देखिएका समस्या, वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा गरेको कुराकानी :
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भएको पाँच महिना पूरा भइसकेको छ । अहिलेसम्म आयोगले के कति काम र प्रगति गरेको छ ?
अहिलेसम्म हामीले सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने मस्यौदा पूरा गरिसकेका छौँ । त्यसलाई केही परिमार्जन र परिस्कृत गरेपछि सरकारलाई बुझाउँछौँ । आयोगको समय एक दिन पनि थप्नुपर्छ भनेर हामी सरकारलाई अनुरोध गर्दैनौँ । तोकिएको समयभित्रै हाम्रो काम पूरा हुन्छ । सोहीअनुरूप हाम्रो तयारी लगभग पूरा भएको छ ।
प्रतिवेदन कहिलेसम्म बुझाउनुहुन्छ ?
हामी यसै हप्ता सरकारलाई बुझाउँछौँ ।
खासगरी विकास आयोजनाको छनोट, ठेक्का प्रणालीका कमजोरी, चालु खर्चको गुणस्तरका सन्दर्भमा समस्या रहेको आयोगले बाहिर ल्याइसकेको छ । सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा यसबाहेक आयोगले पहिचना गरेका खास समस्या के हुन् ?
हामीले खर्चका समस्याका सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ । हाम्रो परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति र प्रचलनमा दशकौँदेखि संरचनागत र प्रणालीगत समस्या छन् । परियोजना पूरा नहुँदै कर्मचारीको सरुवा हुँदा ठेक्कापट्टा समयमै गर्न नसक्ने, सामानको आपूर्ति गर्न नसक्ने, जग्गा खरिद गर्न नसक्नेलगायतका समस्या दोहोरिने गरेको छ । खासगरी परियोजनाको डिजाइन र त्यसको कार्यान्वयनको बीचको ‘नेक्सस’ का कारण समस्या जकडिएका छन् । अगाडि बढ्नेभन्दा पनि संस्थागत, प्रणालीगत रूपमा विभिन्न तहमा अवरोध सिर्जना गरिएको स्थितिछ । यस्तो परिपाटी विकास गरिएको छ, जसले अगाडि बढ्नभन्दा पछाडि धकिल्ने काम गर्छ । यिनै समस्याका कारण मेलम्ची खानेपानी, पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गजस्ता परियोजना दशकौँदेखि पूरा हुन नसकेका हुन् ।
एउटा परियोजनामा विनियोजित रकमभन्दा छ गुणासम्म बढी खर्च हुने, त्यसको गुणस्तर नहुने, समयमा सम्पन्न नहुने लगायतका समस्या छन् । यिनलाई आधारभूत रूपमै कहाँ समस्या छन् भनेर पत्ता लगाएर सरकारले तोकेको कार्य क्षेत्रभित्र रहेर परियोजनाको प्राथमिकीकरण, पुनःसंरचनालगायत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ ।
बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेट थप गरिदिने, कुनै मापदन्डविना बहुवर्षीय आयोजनाको छनोट र बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । खर्च प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा बजेटको विद्यमानस्वरूपमै समस्या हो ?
योजनामै मुख्य समस्या हो । हामीले बजेटको तयारीका लागि समय पुगेन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भनेर जेठ १५ मा बजेट ल्यायौँ तर आधारभूत रूपमा त्यहाँ परिवर्तन आएन । साउनको पहिलो १५ दिनभित्रै जहाँ–जहाँ बजेट जानुपर्ने हो त्यहाँ पुगिसक्छ तर पनि खास उपलब्धि हुन सकेन । यसको मतलव आयोजनामै समस्या छ । बहुवर्षीय आयोजनाका सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत कहाँ, कसरी विनियोजन गर्ने भनेर सहयोग चाहिँ गर्छ तर यस्ता बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का प्रणालीमा राजनीतिक सङ्क्रमणले धेरै समस्या निम्त्यायो ।
अझ बजेट कार्यान्वयन हुने समयमा संसारमै कहीँ नभएको स्रोत सुनिश्चितताका नाममा नयाँ परियोजनालाई पैसा छुट्याउनुपर्ने बाध्यता नेपालमा हुनथालेको छ । मलाई लाग्छ यसको सबैभन्दा ठूलो दोष अर्थ मन्त्रालयको हो । जसले बजेटको अनुशासन पालना गर्नुपर्ने र त्यसले नै स्रोत थाहा नपाई स्रोत सुनिश्चितता भनेर लेखिदिने गरेको छ । श्वेतपत्रमा पनि सरकारको आठ खर्ब रुपियाँ स्रोत नदेखिएको दायित्व देखियो भनेर त उल्लेख नै छ । विधि प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का प्रणाली दिने परिपाटी नै बस्यो । अहिले त्यस्ता आयोजना प्रदेशमा गएका छन् । त्यहाँ झन् बेहाल छ ।
११ हजार त्यस्ता परियोजना प्रदेशमा गएकोमा मन्त्रालयलाई तोेकुवा गरेर शून्य बजेटमा परियोजनाको नाम लेखेर दिएको स्थिति छ । पहिलो वर्ष स्रोत सुनिश्चितता भनेर दियो, त्यसैलाई अर्को वर्ष बहुवर्षीय आयोजनामा छिराइहाल्ने र सरकारको दायित्व सिर्जना गर्ने परिपाटी बसेको छ । यस्तो गर्नुभनेको बजेटको न्यूनतम अनुशासन पनि पालना नगर्नु हो । संसद्ले स्वीकृत गरिसकेपछि पनि फेरि स्रोत सुनिश्चितता भनेर थप्ने परिपाटीलाई के भन्ने ? यो सरकार नबन्दै खासगरी सङ्क्रमणकालको पछिल्लो कालमा यस्ता समस्या धेरै दोहोरिए । हिजोदेखि झाङ््गिएर यी समस्या आए । त्यसको समाधान गर्नुपर्ने खाँचो अहिलेको सरकारलाई छ ।
जेठ १५ मै बजेट ल्याउँदा पनि पुँजीगत खर्चको लक्ष्य र विभिन्न परियोजनाको प्रगति निकै कमजोर हुनुका पछाडि आयोगले के कस्ता कारण पत्ता लगायो ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कार्यान्वयनको अवस्था नै बेवारिसे भयो । कतिपय पुराना परियोजना पूरा नभई होल्ड गरेर राख्ने र नयाँ परियोजनाको लागि पैसा दिने काम शुरु भयो । जुन अहिले अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ । असार मसान्तसम्म परियोजना कार्यान्वयनका लागि जुन किसिमको तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यो पूर्ण रूपमा उपेक्षा भयो । कोही पनि जवाफदेही नहुने परिपाटी स्थापित भएपछि कार्यान्वयन जसरी हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । कार्यान्वयनका लागि जस्तो किसिमको कार्ययोजना हुनुपथ्र्यो, त्यो नहुँदा परियोजना पूरा हुने सुनिश्चितता पनि भएन ।
खर्च प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा जवाफदेहिताको विकास गर्न आयोगले केही सुझाव दिएको छ ?
यो विषयलाई पनि हामीले हेरेका छौँ । जवाफदेहिताको सन्दर्भमा ठोस रूपमा परियोजना पूरा हुँदासम्म को कहाँ जिम्मेवार रहने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ भनेका छौँ । अध्ययनले आवश्यकताअनुसार कानुन र नियममा पनि परिमार्जन गरेर जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । हामी त्यतातिर के उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।
प्रदेशको सन्दर्भमा जसरी आयोजना त्यस मातहत गएका छन्, त्यसको कार्यान्वयन र खर्च हुन सक्ने अवस्था र क्षमता कत्ति पाउनुभयो ?
अहिलेकै सन्दर्भमा प्रदेशमा समस्या छ । खासगरी आयोजनाको छनोट, त्यसको कार्यान्वयन र कर्मचारीको व्यवस्थापनजस्ता विषयमै त्यहाँ मुख्य समस्या देखिन्छ । अधिकांश बजेटमा राखिएका परियोजना मन्त्रिमण्डल र सांसदबाट उत्पत्ति भएका छन् ।
यसको अर्थ भनेको परियोजनाको न्यूनतम सम्भाव्यताको मापदन्ड पूरा भएको छैन । प्रदेशस्तरमा जुन किसिमका परियोजना बजेटमा उल्लेख गरिएका छन्, ती तयारीविना नै समावेश गरिएका छन् । कार्यान्वयनको परिपाटीको सन्दर्भमा खर्च र रिपोर्टिङ कसरी गर्ने भन्ने आधारभूत कुरा नै त्यहाँ छैन । आम रूपमा फजुल खर्च बढी हुने अवस्था भइरहेको छ । यसले प्रदेशलाई चुनौती थपिदिएको छ ।
आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र सार्वजनिक संस्थान पनि रहेका छन् । यस्ता संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीको प्रभावकारिता बढाउन के गनुपर्ने देखियो ?
यस्ता संस्थानमा सरकारको लगानीलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रणनीतिक उपायका विषयमा सुझाव पनि दिँदैछौँ । निजीकरण भइसकेका कतिपय संस्थामा पनि सरकारको दायित्व बाँकी छ । सरकार त्यस्ता संस्थाको दायित्वबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्था छ । घाटामा गएका संस्थानका सन्दर्भमा पनि हामीले सरकारलाई त्यसको सञ्चालनका सन्दर्भ लिनुपर्ने र बनाउनुपर्ने योजनाका विषयमा केही सुझाव दिन्छौँ ।
फरक सन्दर्भमा कुरा गरौँ । व्यापार घाटा, शोधनान्तर स्थिति जस्ता अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकाङ्कका सन्दर्भमा बहस हुन थालेको छ । वर्तमान सरकार गठन भइसके पनि नेपालको अर्थतन्त्र सही दिशामा छ जस्तो लाग्छ ?
यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट हेरौँ । म त्यसको प्रशंसक पनि हुँ । हाम्रो त रेमिट्यान्सको पनि ठूलो हिस्सा छ । यसलाई मैले वित्तीय र व्यापारको रूपमा बुझेको छु । किनकि यसबाट हुने लाभ सीमित व्यक्तिले मात्र लिइरहेका छन् तर पुँजी निर्माणको सन्दर्भमा यसको त्यति भूमिका हुँदैन । त्यसैले आयातमुखी, उपभोगमूखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन यसको पुनःसंरचना आवश्यक छ । यसले रोजगारीसहितको समतामूलक रूपमा अगाडि जान्छौँ भनेर नीतिगत रूपमा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छौँ ।
आधारभूत रूपमा सिङ्गो बजेट, योजना प्रणाली र त्यसको खर्चसँग यो सबै विषय जोडिएको हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जुन रूपमा समृद्धिको रोडम्याप तयार गरिएको छ त्यो ठीक छ । प्रस्थान बिन्दुका रूपमा सरकारले जुन रूपमा आफ्नो दिशा कायम गरेको छ, त्यसले नीतिलाई सहयोग गर्छ तर आधारभूत रूपमा अवरोधपूर्ण जुन परिपाटी सिर्जना भएका छन्, त्यसका सन्दर्भमा प्रयत्न शुरु भएका छन् । त्यसलाई धेरै नै ठोस रूपमा सुधार गरेर जानुपर्ने आवश्यक छ । हाम्रो संरचना र प्रणालीमा उद्यमशीलताको धारणा आवश्यक देखिन्छ ।
स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक सहभागी हुने अवसर पायो । नेपालको अर्थतन्त्र सुधार र विकासमा यस्ता मञ्चले कस्तो अर्थ राख्छन् ?
त्यो मन्चमा सहभागी हुनु नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठा र अवसरको विषय हो । विश्वका विभिन्न देशका प्रमुख र ठूला कम्पनीका कार्यकारी सहभागी हुने ठाउँमा नेपालले सहभागिता जनाउनु पक्कै राम्रो कुरा हो । उनीहरूको दुई वटा एजेन्डा छन्, त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तुति पनि दिनुभयो ।
यसले दक्षिण एसियामा नेपालको रणनीतिक महत्त्व छ भनेर देखाएको छ । सरकार जुन लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ, विश्वमाझ त्यो कुरा बुझाउन पनि यो मञ्च सहयोगी हुन पुग्यो । यसबाहेक विदेशी लगानी भित्र्याउन र प्रविधि ग्रहण गर्न यो नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
प्रकाशित मिति : २०७५|१०|१५